OWE -IFP WOMEN’S BRIGADE UTHI ABASEMAKHAYA BAYALUDINGA ULWAZI LWE COVID -19 – Sivubela intuthuko Newspaper
OWE -IFP WOMEN’S BRIGADE UTHI ABASEMAKHAYA BAYALUDINGA ULWAZI LWE COVID -19
IMeya yasoNdini uWilson Ntshangase enikeza umphakathi izibulalimagciwane ukwilisana nengciwane iCorona Virus
UMENGAMELI wophiko lwe-IFP women’s Brigade uMntwana Phumzile Buthelezi kubalulekile ukuthi Abantu abadala ikakhulukazi abasuka ezindaweni ezisemakhaya banikezwe ulwazi nezibulalimagciwane ukulwisana neCorona Virus.
UMntwana uShenge uhambele edolobheni oLundi ehambisana nelungu lePhalamende uMagdalena Hlengwa Kanye nobuholi bukamasipala obebuholwa iMeya uWilson Ntshangase.
Banikezele Abantu ngezibulalimagciwane njengoba bekunemigqa emide yabantu ebibheke ezikhungweni eziholela imali yesibonelelo sikahulumeni.
“Kubalulekile ukuthi umphakathi ikakhulukazi wasemakhaya ngaleligciwane eliyingozi, baphinde bahlinzekwe nangezinsiza zokubalala amagciwane,” kusho uButhelezi.
Abantu lapha babonakale besemigqeni bengalishiyile ibanga njengomyaleli kaMengameli wezwe ukuzama ukubhebhetheka kwegciwane iCorona Virus.
“Kubuhlungu kakhulu njengoba abantu bakithi bengazi lutho ngaleligciwane abanye Kade sinabanika izibulalimagciwane (Sanitiser) befuna ukugcoba ebusweni ngenxa yokuthi abanalo ulwazi. Inkinga abantu bakithi bazofa kabuhlungu njengoba ziphinde sabayalela ukuba bahlanze izandla ngaso Sonke isikhathi,” kuphetha uButhelezi.
Leli gciwane elihlasele umhlaba wonke kuleli selihaqe abantu abangaphezulu kwenkulungwane njengoba isibalo sku-1353 , kwashona abahlanu ngenxa yaleli gciwane.
Kuzokhumbuleka ukuthi elakuleli lingaphansi kwezinsuku ezingama-21 kume nse yonke into ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane iCorona Virus.
IMeya yakumasipala uLundi uWilson Ntshangase uthi basabele kwikhwela likamengameli nabo njengomasipala.
“Siyawukhathaza umphakathi ukuba ubeke inhlanzeko phambili ngaso Sonke isikhathi ngisho nasemakhaya abahleli ngaphansi kwesimo esihlanzekile, bageze izandla ngaso sonke isikhathi ukuze baphephe kulolubhubhane,”kusho Ntshangase.
Sekuqubuke ukwesaba njengoba leligciwane selikapakele nasemalokishini afana noMlazi kanye naKwaMashu.
IHLEHLELE UNYAKA OZAYO EYAMA OLYMPICS